देउवा एमसिसीबारे भ्रम फैलाइयो, अमेरिकी सेना आउँछ रे ! कसले आउन दिन्छ नेपालमा ? : देउवा - Himali Patrika
देउवा एमसिसीबारे भ्रम फैलाइयो, अमेरिकी सेना आउँछ रे ! कसले आउन दिन्छ नेपालमा ? : देउवा
हिमाली पत्रिका १७ बैशाख २०७८, 4:57 pm
एमसिसी पारित गर्ने सन्दर्भमा अहिले कुनै छलफल नभएको उनले बताए। साथै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि एमसिसी पारित गर्न सहयोग गर्ने भनेको देउवा बताउँछन्।
आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले भने, ‘यो बाबुराम भट्टराइको पालादेखि भएको काम हो । मेरो पालामा त सिग्नेचर गरेर पठाएको मा हो । यत्रो ठूलो अनुदान, ब्याजस्याज छैन । सित्तैमा आएको छ । तर, अनेक भ्रम फैलाइयो ।’
देउवाले झेक्किँदै जवाफ दिए, ‘कहाँ भन्या छु मैले ?’ पत्रकारले भने, ‘बाहिर आएको कुरा हो ।’ देउवाले जवाफ दिए, ‘होइन भनिसकेँ त मैले । फेरि भन्छु सुन्नु, होइन होइन होइन ।’
एमसीसीको विषयमा प्रचण्डसँग सहमति भएको भन्ने कुरा चाहिँ के हो ? देउवाले भने, ‘होइन । प्रचण्डले सहयोग गर्छु भनेको छैन ।’ फाइल तस्विर